बुडापेस्टको थर्मल स्नान | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | बुडापेस्ट, मार्गदर्शकहरू
बुडापेस्ट हंगेरीको राजधानी हो, धेरै पुरानो शहर र लामो समयदेखि एउटा सहर यसको तातो स्प्रि forको लागि प्रसिद्ध, यसको शानदार तातो स्प्रि forहरूको लागि जुन रोमीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो कसरी रमाइलो गर्ने।
आजकल, बुडापेस्ट तातो स्प्रिंग्स तिनीहरू अझै पनि यसको मुख्य पर्यटक आकर्षणहरू मध्येका छन् त्यसैले यदि तपाईं हंगेरीको राजधानीबाट जानुहुन्छ भने तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न। यहाँ हामी तपाईंलाई भन्छौं तिनीहरू कसरी छन्, तिनीहरू कहाँ छन् र तपाईं कसरी रमाउन सक्नुहुन्छ.
2 बुडापेस्टको औष्णिक स्नान
हंगेरीको राजधानी, यो एक सहर हो जसको उत्पत्ति सेल्टिक हो तर जसको रूपमा विकसित भयो रोमन बस्ती। हंगेरीहरू आफैं the औं शताब्दीको अन्त्यमा आइपुग्थे र त्यसबेलादेखि यो क्षेत्र सधैं द्वन्द्वमा पर्ने थियो, पहिले मंगोलहरूसँग र त्यसपछि ओटोम्यान साम्राज्यसँग। पछि यो अस्ट्रो हंगेरी साम्राज्यको हिस्सा हुनेछ।
यसको नाम बुदा, udaबुडा र पेस्ट नामका तीन शहरहरूको मिलनबाट आएको हो। एकीकरण १ 1873 मा भयो। शहर भियनाबाट २१216 किलोमिटर टाढा छउदाहरणका लागि एथेन्सका एक हजार भन्दा बढी, मिलानबाट 788 1500 वा मस्कोबाट १ XNUMX०० भन्दा बढी।
यो एउटा सहर हो डान्यूब नदी दुई मा भाग। यससँग पहाडहरू छन् जुन यसले फ्रेम गर्दछ र हल्का ग्रीष्म र धेरै चिसो जाडोको मौसम। १ th औं शताब्दीको बखत यसले केही खास शहरी परिमार्जनहरू पार गर्यो, जस्तै बुलेभार्डको निर्माणले सबैभन्दा पुरानो छिमेक खोले जहाँ विभिन्न वास्तुकला शैलीहरू एक अर्कासँग मिल्दछन्।
बुडापेस्टको औष्णिक स्नान
रोमीहरूले पानीलाई प्रेम गर्थे त्यसैले उनीहरू यसको विजयमा यसपछि लागे। त्यसकारण उनीहरूले यो क्षेत्रलाई आफ्नो शहरहरू मध्ये एउटा, एक्क्वum्कम निर्माण गर्न छनौट गरे। तिनीहरू डेन्यूबको पश्चिमतिर थर्मल स्नानगृहहरूको आनन्द लिन आएका थिए, जसका भग्नावशेषहरू अझै देखिन्छन्।
सबैभन्दा पुरानो स्नानहरू, तथापि, टर्की शासनको समयदेखि मिति, १ the औं र १ XNUMX औं शताब्दीमा पछाडि। तिनीहरू अझै प्रयोग गरीन्छन् उनीहरू महान छन्। त्यो समयमा कुनै अवधारणा थिएन स्पायो २० औं शताब्दीको सुरुमा देखा पर्‍यो, जब उच्च वर्गका लागि पर्यटन पहिले नै विकसित भएको थियो र शहर प्रख्यात हुन थाल्यो। बुडापेस्ट जत्तिको थर्मल नुहाउने कुनै अन्य शहर छैन।
पुरानो तातो स्प्रि modernलाई आधुनिकीकरण गरिएको छ र आज, आधुनिक प्रविधिको धन्यवाद, अधिक आधुनिक पौंडी पोखरी, सौना र स्टीम कोठाहरू सरल स्नानगृहमा थपियो। त्यहाँ धेरै साइटहरू छन्: उदाहरणका लागि, भेली बेज र डान्डरको अधिक परिचित वातावरण छ, गेलर्ट अत्यन्त सुन्दर छ र रुदास यसको टर्की पोखरीहरूको लागि धेरै लोकप्रिय छ। Lukács र Széchenyi २ 24 घण्टा खुला छन्, त्यहाँ हल्का प्रभाव र कार्यक्रमहरूको साथ रात पार्टीहरू पनि छन्।
को Dagály तातो स्प्रिंग्स तिनीहरू मार्गारीटा टापु नजिकै कीर इलाकामा सबैभन्दा ठूला हुन्। यो स्थानीयहरूको लागि धेरै लोकप्रिय छ र नदीमा स्पा, शरीर मालिश गर्न एक व्हर्लपूल, घाँटीको लागि कडा नुहाउने, र आराम गर्नको लागि शान्त तालहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ तरंग पूलहरू पनि छन् र यसमा घाँस र रूखहरूको विशाल पार्कमा समुद्र तट छ।
ज़ोचेनी यसमा २१ पोखरीहरू छन् र यो महाद्वीपको सब भन्दा ठूलो परिसरहरूमा एक हो। यो एक अन्डरवाटर जाकुजी, घाँटी वर्षा, एक बुलबुले पूल, औषधी उपचार, एक जिम, एक सौना छ ... यो बिहान 21 बजे खुल्छ र राती १० बजे बन्द हुन्छ।
El डण्डर यो सहरको 9th औं जिल्लामा हो, एक आर्ट-डेको ईटको अनुहार सहित एक सुन्दर भवनमा, १ 30 .० को दशकमा। यो एक सौना, एक बरफ मेसिन, स्टीम कोठा, औषधीय पानी, गहिरो पोखरी, मसाज सेवा, र दुई आराम पूल र शतरंज बोर्डहरूको साथ आउट गर्न एक आउटडोर पार्क समावेश गर्दछ। मूल्यहरु मैत्रीपूर्ण छन्।
को Lukács तातो स्प्रिंग्स तिनीहरूमा पौंडी पोखरी, साहसिक पोखरी, र तातो स्प्रि .हरू समावेश छन्। त्यहाँ एक सौना, एक जैकुजी, वर्षा र उनीहरूको अनुसार एक धेरै राम्रो औषधीय सेवा छ। तिनीहरू पनि बिहान6देखि १० बजे सम्म खुला छन्। आफ्नो भाग को लागी Veli Bej तातो स्प्रिंग्स तिनीहरू सबै भन्दा धेरै पारिवारिक वातावरण संग हो। तिनीहरू डेन्यूबमा इस्ला मार्गारीटाको अगाडि अवस्थित छन्, र लुकाक बाथबाट टाढा छैनन्। यो एक को बारे मा छ विशिष्ट टर्की स्नान १1574 मा निर्माण। यो सुन्दर छ!
Veli Baj एक विशाल तातो पानी पूल र चार साना थर्मल पूल छ। योसँग एक जाकूजी, दुई स्टीम कक्ष, मसाज वर्षा र पैदल पोखरी, एक फिनिश फिज सौना र मालिश पनि छ। यो अस्पतालर ब्रदर्सको आदेश द्वारा सञ्चालित छ र सस्तो मूल्यहरु छ। आगन्तुकहरूको संख्या सानो छ तर साइटको उमेर यसको लायक छ।
त्यहाँ पनि छन् किर्ली बाथरूमअर्सलान पास इनको अर्डरमा अर्को टर्की हट स्प्रि। निर्माण गरियो 1565। यो ऐतिहासिक तातो वसन्त हो, जुन शहरलाई ओटोम्यान-शैलीको नुहाउने परिचय दिने पहिलो हो। त्यहाँ विभिन्न तापक्रम, स्टीम क्याबिन र सौनाहरूका पानीका साथ चार पोखरीहरू छन्। महिला र पुरुष हप्ताको हरेक दिन स्वागत गरिन्छ।
को Gellért थर्मल बाथहरू हामीले भन्यौं तिनीहरू लक्जरी छन्। त्यहाँ भित्री र बाहिरी पोखरी, निजी स्नान, मसाज, पेडीक्योर, स्टीम कोठा, फिनिश स्नान, वेभ पूल र अन्य धेरै छन्। यो बिहान6बजे खुल्छ तर बेलुका at मा बन्द हुन्छ, हरेक दिन। रुदास यो पाँच शताब्दी पहिले टर्क्स द्वारा निर्मित अर्को तापीय स्नान हो। हप्ताका दिन पुरुष र महिलाहरूलाई अलग राखिन्छ तर सप्ताहन्तमा तिनीहरू मिक्स गर्न सक्छन्।
El पालाटिनस थर्मल बाथ पहिलो खुला वायु स्नान हो। यसमा दस पोखरीहरू छन्, यो विशाल छ र सबै बर्ष खुला छ बिहान 8 देखि साँझ 8 सम्म। त्यहाँ पनि छ एक्वाटिक वर्ल्ड रिसोर बुडापेस्ट, अधिक आधुनिक, नयाँ, इनडोर पानी पार्कहरू सबै उमेरका लागि र सबै वर्ष खोल्नुहोस्।
यो बुडापेस्टको उत्तर हो र यो उत्तम छ यदि तपाईं आराम गर्न चाहनुहुन्न तर धेरै एड्रेनालाईनसँग रमाईलो गर्नुहुन्छ किनकि त्यहाँ धेरै स्लाइडहरू, छालहरू छन्, तपाईं सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सबै। यो साइट बिहान6देखि १० बजे सम्म खुला छ।
अन्ततः त्यहाँ छ मंडला डे स्पा, एक नयाँ र विलासी ठाउँ जुन अधिक आध्यात्मिक अनुभवका साथै एक आरामदायी सँगै जोड्न प्रयास गर्दछ। यो विलासी हो किनकि यसका अनन्य सेवाहरू र उच्च मूल्यहरू छन्। यो बिहान १० देखि अपरान्ह १० बजे सम्म खुल्छ।
बुडापेस्टका विशेषज्ञहरू भन्छन कि यदि तपाईं शहर भ्रमण गर्नुहुन्छ र समर्पण गर्न केवल एक देखि तीन दिन छ सबै भन्दा राम्रो थर्मल स्नानहरू ती Szechenyi मा हुन्। किन? यसको राम्रो मूल्य छ, सस्तो छैन तर यसले के प्रस्ताव गर्दछ जुन उनीहरू धेरै राम्रो छन् (१ 18 यूरोबाट), ती ऐतिहासिक तातो स्प्रि areहरू हुन् जुन सेवा गर्दै आएको एक शताब्दी भन्दा बढीको छ र यो रमाइलो ठाउँ हो किनकि यो यसको धेरैसँग लगभग एक भूलभुलैया हो। पोखरी
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » बुडापेस्ट » बुडापेस्टको थर्मल स्नान
यो सेन्ट पिटरको बेसिलिका र यसको गुम्बज हो